Qubanaha » Muuse Suudi “Waan dulmanahay Wasiirka qaraxyada lagu qabsado ayaa nala siiyay”
Muuse Suudi “Waan dulmanahay Wasiirka qaraxyada lagu qabsado ayaa nala siiyay”
Senator Muuse Suudi Yalaxow, ayaa sheegay inay ku dolman yihiin qaabka awood qaybsiga xilalka dowladda Somaliya, haddii ay yihiin beelaha ka soo jeeda Maamulka Hirshabelle.
Muuse Suudi oo ka hadlaayay arimaha ku aadan awood qaybsiga, ayaa wuxuu sheegay in Beeshiisa ay ku dolman tahay saami qaybsiga siyaasadeed ee dalka, wuxuuna sheegay in maamulada qaar beelaha ka soo jeeda la siiyay Wasiiro tiro badan iyo Wasaaradda miisaan leh sida uu yiri.
Waxa uu sheegay haddii ay yihiin beelaha ka soo jeeda Hirshabelle in dowladda ay siisay Wasiirka amniga oo uu ku tilmaamay inuu yahay Wasiiirka qaraxyada lagu qabsado iyo Wasiirka Warfaafinta oo uu ku tilmaamay midka qaraxyada ka hadla.
“Waxaan ku dulmanahay Gobolkaan, sharciga qabo saddex wasiir oo Wasiirada ku jirta hal Gobol in la isku siiyo ma ogi aniga, arimaha Gudaha, qorsheynta iyo Dastuurka Puntland ayaa la siiyay, Goboladan waxaa la siiyay Wasiirka qaraxyada lagu qabsado iyo Wasiirka qaraxyada sheega, waxaa kuu soo haray, amniga ciidamadii amniga Boolis, Militari iyo Nabad Suggid kuli hal wareegto ayaa la isaga qaaday.” Ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow.
Xildhibaan Muuse Suudi, ayaa aad u dhaliilay sida fudud ee xilalka looga qaaday masuuliyiintii Gobolka Banaadir oo hal maalin xilalka laga qaaday marka laga reebo Gudoomiyihii Gobolka.
Sida muuqata dowladda cusub ee Farmaajo ayaa la kulmaysa dhaliilo kaga imaanaya xubnaha Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya iyo kuwa Aqalka Sare ee dalka, waxayna dhaliilahaasi salka ku hayaan sida fudud ee xilalkii dowladda la isaga xayuubiyay.
Muuse Suudi Yalaxow, ayaa ka mid ah xubnaha Senatarada dalka ee miisaanka ku leh Aqalka Sare ee dalka Somaliya.